Zimbabwe tour to South Africa Archives - Cricket365
Zimbabwe tour to South Africa
Final T20I between Proteas and Zimbabwe called off
The third T20 between the Proteas and Zimbabwe was abandoned on Sunday as heavy rains in Benoni continued unabated leading to a waterlogged outfield at Willowmoore Park.
Proteas release Tahir for final two T20Is against Zimbabwe
The Proteas have released spinner Imran Tahir from their squad for the remaining two T20Is against Zimbabwe later this week.
A fifty on international debut from Rassie van der Dussen and a five-wicket haul by veteran spinner Imran Tahir fired the Proteas to a 34-run victory over Zimbabwe in the first of three T20I in East London on Tuesday.
Williams: World Cup pain still haunts Zimbabwe
Zimbabwe batsman Sean Williams says narrowly losing out on a place at next year's World Cup still haunts the team as they look to be a competitive force in international cricket again.
Zimbabwe captain Hamilton Masakadza says he and his team were surprised at how the pitch played in Kimberley after suffering a five-wicket defeat against the Proteas in the first match of the ODI series on Sunday.
Zimbabwe coach Lalchand Rajput is not phased about his side's dismal record on South African soil as they prepare for a three-match ODI series against Proteas, starting in Kimberley on Sunday.